जग्गाधनी पूर्जा नहुदाँ चेपाङहरुले घर बनाउन पाएनन् : फियान नेपाल
फियान नेपाल जग्गाधनी पूर्जा नहुदाँ चेपाङहरुले घर बनाउन पाएनन्
जग्गाधनी पूर्जा नहुदाँ चेपाङहरुले घर बनाउन पाएनन्
उठिवास लाउँछ कि सरकारले
भुकम्प पश्चातको आवास पूननिर्माण लाभग्राही सूचीमा नाम नपरेर घर बनाउन नपाएको कुरा त पुरानै हो । आवास पुननिमार्ण सुचीमा नाम भएरपनि घर बनाउन नपाएको नयाँ किसिमको समस्या आएको छ । बेनीघाट–रोराङ गाँउपालिका वडा नं. २ (साविक महादेस्थान गाविस वडा नं. ३ र २) पार्लाक, बाङकुर्ती र भैसे गाँउका चेपाङ समुदाय यस्ता समस्यामा परेका हुन् ।
बाकुराङबाट पूर्ण बहादुर चेपाङ, हस्त बहादुर प्रजा, सुकरा चेपाङ, सुकराम बहादुर चेपाङ, सोम सिं चेपाङ, चन्द्र बहादुर चेपाङ, दिपलाल चेपाङ, सोम बहादुर चेपाङ र सोम बहादुर चेपाङको आवास निमार्ण लाभग्राही सूचीमा नाम निस्केको छ । यसैगरी पार्लाकबाट शुकराम चेपाङ, लाल बहादुर चेपाङ, दिल बहादुर चेपाङ, वीर बहादुर चेपाङ, शेर बहादुर चेपाङ, विक्रम चेपाङ र आइत सिं चेपाङको नाम आवास निमार्ण लाभग्राही सूचीमा नाम निस्केको छ । आवास निमार्ण सुचिमा नाम भएर पनि घर निमार्ण गर्न सम्झौता रोकिए पछि धेरै पटक वडा कार्यालय र गाँउपालिका धाएको जीत बहादुर चेपाङले बताए । दिल बहादुर चेपाङले थपे “मेरो त घरको जगसम्मै लडेको थियो नाम निस्केन, नाम निस्केकाहरुले पनि घर बनाउन पाएका छैनन् । नाम निस्केर मात्र के गर्नु हाम्रो पूर्जा छैन हामीले घर बनाउ नपाउने?” घरको जगसम्मा उत्रेका अर्का लाल बहादुर चोपङले थपे “विहान वेलुका के खाउ भन्नु परेको छ । घर कसरी बनाएर बस्नु । न पानी छ, न अन्न छ, छ त दुःखी ज्यान मात्र । हाम्रो लागि बोलि दिने को छ र ।“
आफुहरुसंग जग्गा हुदाँ हुदै पनि सुकुम्वासी हुनु परेकोमा पिडा छ । जुन पीडा हामीसंग छ, हाम्रो मात्रै प्रयासले हटाउन सकिदैन । गाँउभरीका सवैको पूर्जा छैन । पार्लाक र बाङकुर्ती गाँउका जग्गा २०३२ सालमा बाग्मति अञ्चल, धादिङ जिल्ला, लोथर कान्द्राङ पञ्चायत वडा नं. ४ को ठेगानामा नापी भएको थियो । तर अहिले लोथर कान्द्राङ चितवन जिल्लामा परेको कारणले यो समस्या परेको हो ।
बनीघाट-रोराङ गाउँपालिका, वडा नं २ का अध्यक्ष टंक बहादुर थापाका अनुसार नापी धादिङ जिल्लाबाट भएको र पछि भूगोल चितवनमा गाभिएकोले श्रेस्ता चितवन जिल्लामा छ । अव उनीहरुले नापी भएदेखि भुमिकर पनि तिरेका छैनन् । अव पूर्जा निकाल्न भूमिकर तिर्नु पर्ने अवस्था आयो भने कसरी तिर्न सक्छन् । अहिले उनीहरुसंग नागरिकता र मतदाता परिचय पत्र धादिङ जिल्लाबाट बनेको छ । समस्या समाधान गर्न चितवनको राप्ती नगरपालिका र धादिङको बेनीघाट रोराङ गाँउपालिकाले संयुक्त रुपमा पहल गर्नु पर्ने बताए ।
“हामीसँग जग्गा छ, नापी पनि भएको छ तर प्रमाण छैन, पूर्जा छैन, उठिवास लाउँछ कि सरकारले भन्ने चिन्ता छ । हामीलाई धादिङबाट नै लालपुर्जा चाहिन्छ, चितवन जादैनौ ।“ एकै सासमा रुप बहादुर चेपाङले भने । “हामीलाई खाद्यान्न र पानीको पनि अभाव छ । सुत्केरलिाई टाँकीको मुन्टा, सिस्नो, लट्टे खुवाउनु पर्ने अवस्थाका हामीले कसरी घर बनाउनु । हामी ज्यालाबाट बाँचेका छौं । जंगलमा खाने चीज के पाइन्छ भनेर खोज्दै हिड्नु पर्छ ।“ कयौ दिन भोकै सुतेको सम्झे रुप बहादुरले ।